Zinedine Zidane oo fariin u diray tababaraha cusub ee Real Madrid Julen Lopetegui - Halbeeg News
Soomaaliya iyo Koonfur Afrika oo ku heshiiyay iskaashi dhanka waxbarashada ah
Madaxweynaha Burundi: Waxaan u baahannahay in dib loo eego ka bixitaanka ciidamadeenna ee Soomaaliya
Madaxweyne Farmaajo oo soo gabagabeeyay booqashadiisii Burundi ayaa soo gaaray Jabuuti
Shirka qaran ee dhab-u-heshiisiinta oo maanta ka furmay Muqdisho
RW ku xigeenka Soomaaliya oo Sucuudiga kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi
Shirkadda Spectrum oo beenisay eedda Kenya ee ku saabsan khilaafka badda ee Soomaaliya
Baarlamaanka Kenya oo dib u dhigay safar ay wasiirka arrimaha dibaddu ku imaan lahayd Muqdisho
QM iyo dowladda Soomaaliya oo maanta Muqdisho ku daahfuray sanduuqa dhisidda Nabadda
RW Kheyre oo maanta dhagax-dhigay waddooyin isku xiraya Banaadir iyo labada Shabeelle
Zinedine Zidane oo fariin u diray tababaraha cusub ee Real Madrid Julen Lopetegui
in Ciyaaraha, Soomaaliya, War Degdeg
Madrid (Halbeeg)- Tababarihii hore ee kooxda Real Madrid horayna ciyaariyahan usoo ciyaaray kooxda ka dhisan caasimadda dalka Spain ee Real Madrid ayaa fariin u diray tababaraha cusub ee kooxda leylin doona xagaagan Julen Lopetegui.
Zinedine Zidane ayaa sheegay in falsafadda kooxda Real Madrid ay tahay in aad badisaa kuna guuleysataa koobab badan.
“Marka aad tahay tababaraha kooxda Real Madrid, waa inaad ku guuleysataa wax walba, isla markana ay kaa go’anaato inaad ilaashato qaab ciyaareedkaaga, taasi ayay ahayd falsafada aan ku dhaqmi jiray” ayuu yiri Zidane.
Zinedine Zidane ayaa intaas ku daray in ay muhiim tahay in aad isdejiso marka aad heysato ciyaariyahanno xirfad iyo khibrad ba leh si aad u guuleysato.
“Markaad la shaqeeneyso ciyaartoy tayo leh ee khibrad badan, waxa ugu muhimsan waa inaad is dejiso, waana taas waxa aan u baahnaa inaan sameeyo marka aan ahaa ciyaaryahan, isla talaabadaas ayaan qaatay xirfadeyda tababarka” ayuu yiri tababare Zidane.
Tababare Zidane ayaa sharaxaad ka bixiyay sidii ay ugu suurta gashay in xiliciyaareedkiisii ugu horeeyay kii labaad iyo kii sadexaadba uu koobab kala duwan uu ku guuleysto.
“Inaan ku guuleysto saddex jeer oo xiriir ah Champions League ayaa waxay aad ugu wanaagsan tahay siyaabo kala duwan, ugu horeyn waa wax aan caadi ahayn, sababtoo ah waa xilli ciyaareedkeygii ugu horeeyay ee tababarnimo, kii labaad ayaa isna ahaa mid wanaagsan marka loo fiiriyo qaab ciyareedkii aan kala hortagnay Juventus, kii saddexaad ayaa ka dhignaa isna inuu muhiim u ahaa xirfadeyda tababarnimo ee kooxda Real Madrid” ayuu kusoo gabagabeeyay tababare Zidane.
Wasiirrada A. Dibadda Somalia, Ethiopia iyo Eritrea oo Jabuuti ku wajahan
Wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea oo gaaray Jabuuti
Kenya oo lala wadaagay digniino ku aaddan weerarkii hotel Dusit ee Nairobi
Ilhan Cumar oo raali gelin ka bixisay hadal ay ku soo qortay barteeda Twitter-ka
Madaxweyne Farmaajo oo Garoowe lagu soo dhaweeyay